महामारी बल्ल सुरु हुँदैछ, सरकारले हात उठायो – Paluwa Khabar
महामारी बल्ल सुरु हुँदैछ, सरकारले हात उठायो
कार्तिक २९, २०७७ शनिबार 37
काठमाडौैं । नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण भित्रिएको नौ महिना भयो । चीनको वुहानबाट फर्किएका नेपाली विद्यार्थीमा माघ ९ मा पहिलोपटक संक्रमण पुष्टि भएको थियो । दोस्रो केस चैत १० मा देखियो ।
असोजसम्म आइपुग्दा देशमा बल्ल महामारी सुरु भएजस्तो देखिन थालेको छ । तर, सरकारले चाहिँ यहीबेला हार मानेर हात उठाएको छ
चैतदेखि असारसम्म क्रमश संक्रमितको संख्या त बढ्यो, तर बहुसंख्यक संक्रमित भारत वा तेस्रो मुलुकबाट आयातीत थिए । तर, पछिल्लो तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) मा संक्रमितको संख्या मात्र होइन, मृत्युदर पनि बढेको बढ्यै छ ।
चिकित्सकहरुका शब्दमा भन्दा नेपालमा कोरोनाको महामारी साँचो अर्थमा बल्ल सुरु भएको छ । कोभिड अस्पतालका एक चिकित्सक भन्छन्दो स्रो केस भेटिँदा बम पडि्कएजस्तो भयो, हामी सबै आत्तियौं । त्यो अस्वाभाविक पनि होइन । तर, साँचो अर्थमा महामारी त बल्ल सुरु हुँदैछ । सरकारले भने हार मानिसकेको देखियो ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पछिल्ला दुईवटा निर्णयले पनि उसले हार मानेको चिकित्सकहरुको विश्लेषणलाई पुष्टि गर्छ ।
पहिलो, कोरोना परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार अब आर्थिकरुपमा विपन्न, अशक्त, जेष्ठ नागरिक र फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मीमा लक्षण देखिएमा मात्रै सरकारले निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्छ । तर, यो रकम उनीहरुको कोरोना विमाबाट कट्टी गरिने छ । अरुले भने आफ्नै खर्चमा परीक्षण र उपचार गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने वर्गमा परेकाहरुले पनि के-के प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने यकिन छैन । तर, यो निर्णय कात्तिक २ गते आइतबारबाटै लागू हुने भनिएकाले भोलिबाटै कोरोनाको परीक्षण र उपचार प्रभावित हुने देखिन्छ ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हरेक दिन हुने पीसीआर टेष्टमध्ये करिव ६० प्रतिशत सरकारी प्रयोगशालामा हुने गरेको छ । सरकारी प्रयोगशालामा हुने परीक्षणमध्ये बहुसंख्यक निःशुल्क छ । लक्षण देखिएका, संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा पुगेकाहरु सरकारी प्रयोगशालामा घण्टौं लाइन लागेर स्वाब दिने गरेका थिए ।
नयाँ निर्णयसँगै कम्तिमा दुई हजार रुपैयाँ तिर्न सक्नेहरुले मात्र कोरोना परीक्षण गर्नेछन् । किनकि, दुई हजार रुपैयाँ ज्याला मजदुरी गरेर हातमुख जोर्नेहरुका लागि यो रकम ठूलो हो । एक त कोरोना महामारीका कारण आर्थिक अवस्था दयनीय भएको छ । त्यस्तोबेला परिवारको ४/५ जनाको कोरोना परीक्षण गर्नुपर्दा उसले ऋण खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको विकल्प हुन्छ, परीक्षण नै नगर्ने ।
संक्रमण भएमा उपचार खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्ने निर्णयले पनि विपन्न वर्गलाई परीक्षण नगर्न प्रेरित गर्ने देखिन्छ ।
कोरोना संक्रमितको उपचार गरेवापत सरकारले निश्चित रकम दिँदा त विपन्न तथा निम्न आय भएकाहरुले निजी अस्पतालमा भर्ना पाउनै नसक्ने अवस्था थियो । अब उनीहरुले निजीतिर चिहाउँदै नचिहाए हुने अवस्था सृजना भएको छ ।
यसले सरकारी अस्पतालहरुमा चाप बढ्छ र, त्यहाँ भर्ना गर्न सोर्सफोर्स चाहिने अवस्था आउनेछ । अहिले नै सरकारी अस्पतालहरुमा आइसोलेसन मात्र होइन, आईसीयू र भेन्टिलेटर बेड प्याक भइसकेका छन् । अक्सिजन बेडका लागि पनि पालो कुरेर बस्नेहरुको संख्या ठूलो रहेको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
परीक्षणका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने र संक्रमण पुष्टि भएपछि पनि अस्पताल भर्ना हुन नसक्ने अवस्थाले मध्यम तथा विपन्न वर्ग परीक्षण नै नगर्ने निर्णयमा पुग्न सक्छन् ।
त्यसमा सहमत एक कोभिड अस्पतालका डाक्टर भन्छन्, ‘बेड नभएर होइन, नपाएर मानिसहरु मरिरहेका छन् । मेडिकल कलेजलाई सरकारले लिएर अक्सिजन बेडको व्यवस्था गरौं भनेको महिनौं भइसक्यो । सरकार यस्तो अवैज्ञानिक निर्णय गर्छ ।’
उनका अनुसार पर्याप्त अक्सिजन वेडको व्यवस्था गर्ने र लक्षण भएका संक्रमितलाई सुरुबाटै चिकित्सकको निगरानीमा राख्ने हो भने धेरैलाई आईसीयू र भेन्टिलेटर नै चाहिँदैन । तर, सरकारले अक्सिजन बेडहरुको व्यवस्था गर्नुको साटो कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार नै नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसले परिवारका बृद्धबृद्धालाई जोखिममा पर्छ नै, समुदायमा संक्रमण थप फैलाउन भूमिका खेल्छ ।
दोस्रो, कोरोना संक्रिमितको होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएमा आफन्तले नै शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
Prevपाकिस्तानि सेनाकाे आक्रमणमा ११ भारतियकाे मृ’त्यु
Nextभारतबाट तिहार मनाउन नेपाल घर फर्किँदै गरेका ३ जनाको कार दु’र्घटनामा मृ’त्यु
एमाले वि’ भाजनको अवस्थामा पुर्याउने माधव नेपाल गिरोहकाे भयो यति ठुलो भ’ ण्डाफाेर, जताततै खै’ लाबैला
ए’ क्कासी प्र’ चण्डको श्रीमती सीतालाई के भयो यस्तो? भ’ क्कनिए प्रचण्ड
चिनियाँ राजदुत र प्रचण्ड बिच भेटबार्ता
कोरना हस्पिटलमा कार्यरत २० वर्षकि नर्सको कोरना लागेर मृत्यु हार्दिक श्रद्धाञ्जली । हेर्नुस्